Daehan, Minguk, Manseh အမွှာလေးသုံးယောက်တို့ရဲ့ Happy Lunar New Year Wish !
ဝါး တော်တော်ကြီး အရွယ်ရောက်လာကြပြီပဲ !!
နာမည်ကြီး Return of Super Man ဆိုတဲ့ Variety Show ကနေတစ်ဆင့် အားလုံးရဲ့ အချစ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Song Triplets ကတော့ ကိုယ်တွေမျက်စိရှေ့မှာတင် တော်တော်ကြီး အရွယ်ရောက်လာကြပါပြီ။ Variety Show အပြီးမှာတော့ Appa နဲ့ အတူ မကြာမကြာပွဲတွေတက်ခဲ့ပေမယ့် Show တွေမှာတော့ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် SongTriplets Fan တွေ လွမ်းနေကြမှာ သိလို့ထင်တယ် Appa က သူရဲ့ Instagram မှာ SongTriplets ရဲ့ ပုံလေးတွေကို မကြာမကြာ update လုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
အခုလည်း Song Il Kook ရဲ့ Instagram မှာ Lunar New Year အတွက် Fan တွေကို နှုတ်ဆက်တဲ့ Video လေးကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် လိမ္မာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးတွေပါလိမ့်.. အဲ့လိုအပြုအမူလေးတွေကြောင့် မြင်သူတိုင်း မချစ်ပဲမနေနိုင်ပါဖူး။ ဒါလေးတွေနဲ့ပဲ Fan တွေရဲ့ သဲသဲလှုပ်ချစ်တာကို ခံနေရတာပါ… ??
PREVIOUS POST Previous post: “M!Countdown” မှာ နံပါတ်၁ နေရာကိုရယူထားတဲ့ Red Velvet ရဲ့ ‘Bad Boy’
NEXT POST Next post: အသစ်အဆန်းတွေ လုပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်တဲ့ G-Dragon ရဲ့ Instagram က Teaser image